China Obere-okomoko oval egg mmiri mmiri na ntọala kachasi mkpa iko karama factory na suppliers | Jiamei
Obere-okomoko oval egg mmiri mmiri na ntọala kachasi mkpa iko karama
Ikike: 5ml, 10ml, 15ml (Ọ bụrụ na ị chọrọ ọzọ size, biko jikọọ ahịa ọrụ.)
Ojiji: Mmiri mmiri, isi,
oval mmiri mmiri ntọala kachasi mkpa iko karama
Oval / akwa
silk ihuenyo, na-ekpo ọkụ zọ, frosting, labeelu, na-ebi akwụkwọ na agba na ndị ọzọ
Ahụ nke oval mmiri mmiri na-acha ọcha bụ karama karama kara aka ka emere ya dị ka akwa ma yie okirikiri ma mara mma. Igwe karama ahụ bụ nke iko, bụ nke siri ike yana enweghị mmekọrịta gburugburu ebe obibi. , ọ naghị adị mfe ịda.Akpụkọtara ọnụ olu ya na ụkpụrụ dị nro, Ọ dị iche na agba nke karama ahụ.Ọ nwere ike ịchekwa mmiri mmiri dị ka ntọala, shampoo na mmanụ dị mkpa.Biko kwenye na ịdị mma ya, bụ site na nyocha dị mma , biko jide n'aka iji use.We nwere silk ihuenyo, na-ekpo ọkụ zọ, frosting, labeelu, na-ebi akwụkwọ na agba na ndị ọzọ na Filiks, otú anyị nwere ike ahaziri dị iche iche okwu na ihe nakawa etu esi ị chọrọ.
Ọ na-ewe nnọọ obere ohere na akpa gị, ikike dị mkpụmkpụ maka ọrụ n'èzí, ezumike, njem azụmahịa, njem, ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ihe nkiri, wdg. Ou na-eweta akpa mpempe akwụkwọ maka nchekwa dị mfe na ibu, ị nwere ike ịhazi ya na atọ ọmarịcha agba iji nyere aka gwa ncha ntutu, ntutu na ndị ọzọ. Debe akpa gị nke ọma ma dị mma.
Emebere karama ahụ na ọnụ ọnụ iji hụ na ọ dabara adaba. Were akwa mkpuchi n'ime akpa maka ịdị ọcha na nchekwa. Zere nrụgide mberede ka ị ghara ichegbu onwe gị maka ịwụfu ma ọ bụ ịwụfu mgbe ị na-eme njem. , ị nwere ike ihicha ya ma jiri ya ọzọ.Ọ bụ nnukwu uru dị ka can nwere ike iji ma rite uru nke ngwaahịa dị elu ugboro ugboro.
Anyị nwere ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa mara mma iji gee ntị na nsogbu gị wee nye gị azịza .Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị. Anyị na-atụ anya igosipụta mmekọrịta mmekọrịta gị na gị！
Nke gara aga: Hot Sale Piel J.Randall ọmụmụ kalama maka anam-elu mmiri na ude mmiri
Osote: Mbukota ịchọ mma na-eme ka iko iko ude mara mma na ite dị ọcha